२८७ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रचण्ड–माधव समूहको निर्णय निर्वाचन आयोगमा पेशMain Samachar
२८७ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रचण्ड–माधव समूहको निर्णय निर्वाचन आयोगमा पेश
८ पुष २०७७, बुधबार १७:२१ प्रकाशित
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नकेपा) प्रचण्ड–माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णयहरु निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको छ । बुधबार निर्वाचन आयोगको कार्यलय पुगेर उक्त समुहका केन्द्रीय सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे लीलामणि पोखरेल, मुक्ति प्रधान लगायतका नेताहरुले बैठकको निर्णय पेश गरेका हुन् ।
निर्णयमा केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट निस्कासन गरिएको, माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको लगायत उल्लेख गरिएको छ । उक्त निर्णयमा २९० जना केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम समावेश गरिएको छ । जसमध्य २ सय ८७ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर रहेको छ । बाँकी तीन जना उपत्यका बाहिर रहेकोले हस्ताक्षर सम्भव नभएको बताइएको छ ।
उक्त समूहले आफुहरु वैधानिक रहेको कारण चुनाव चिन्ह पनि आफुहरुले नै पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । नेकेपाको कुल ४४७ केन्द्रीय सदस्यमध्य प्रचण्ड–माधव समुहमा २९० जना केन्द्रीय सदस्यको समर्थन रहेको बताइएको छ ।
मंगलबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफु र महासचिवसहितको केन्द्रीय सदस्यको निर्णयअनुसार ५ सय ५६ केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको ब्यहोरा निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले ११९० जनाको महाधिवेशन कमिटी समेत घोषणा गरिसकेका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा दुबै समूहले आ–आफ्नो दाबीसहितको निर्णय दर्ता गरेपछि छानविनको आधारमा निर्णय हुने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । उनले चाँडै नै यस बिषयको टुंगो लगाउने समेत बताएका छन् ।
एकिकृत समाजवादीले महासचिव चयन गर्दै, को को छन् दाबेदार ?
१ हजार ४७८ संक्रमित थपिए, ६ जनाको मृत्यु
परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएका डा नारायण खड्का को हुन् ? यस्तो छ उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जीप सफारी खोल्ने तयारी
एकीकृत समाजवादीको महासचिवमा डा.बेदुराम भुसाल
गण्डकीलाई पहिलो साक्षर प्रदेश बनाउँछौँ : मन्त्री श्रेष्ठ